Eluigwe na ala e kere site n'okwu Chineke | Apg29
Eluigwe na ala e kere site n'okwu Chineke
Ha na-eleghara eziokwu ahụ bụ na ihe nile ugboro na ndị mmadụ kweere na ụwa gburugburu. Ọbụna Bible na-ekwu na a gburugburu ụwa!
The ụgha nke ala ga-ewepụghị si-ekweghị na Chineke, bụ ndị chọrọ imebi na ịkwa emo Kraịst. Ya mere, ndị ụgha sitere emegide nke Kraịst okwukwe! Ụgha a nwere otú ụfọdụ Ndị Kraịst nakweere na nabatara!
Dị ka ị maara, m nwere ihe isiokwu na video hụrụ na ụwa anyị gburugburu. Mkpa a gaghị a ọkà mmụta sayensị na-aghọta. Ị dị nnọọ nwere pụọ na a doro anya abalị na-ele anya ruo mgbe kpakpando ị pụrụ ịhụ na ha na-akpọ gburugburu ụwa.
Ma mgbe ị na-elu isiokwu a triggered ụfọdụ malitere ozugbo ma na-agbalị na ihe fọrọ nke nta àgwà nkwusa na-ndị ọzọ nke anyị na ha kweere na a ewepụghị ụwa. Dị na mbụ, ha na-adịghị ọtụtụ ndị na-ekwusa ozizi nduhie, ma ha na-eme ihe ịrịba Nigeria. Na ezughị arụmụka, nke doro anya na ha na-eme, mgbe ahụ, otu ma ọ bụ na-eme ihe ike ike. Na nke a bụ banyere ihe na-ekpughe na e nwere ihe na-ezighị ezi na-adịghị mma.
Otu nwere ike na-eche na ọ dịghị ihe o mere ma ọ bụrụ na ụfọdụ Ndị Kraịst (n'ihi na e nwere ụfọdụ Ndị Kraịst) bụ ndị kweere na a ewepụghị ụwa, ma ọ dịghị na-emeghị ihe ọjọọ. Atọhapụ a ụgha, mgbe ahụ, ọ dị mfe ka ihe ndị ọzọ kwa. E nwere ihe a ewepụghị ụwa na-akwado echiche, dị ka ekweghị na Oké Mgbukpọ nke nde ndị Juu isii mere mgbe Agha Ụwa nke Abụọ.
The ụgha nke ekweghị na Chineke
Ọ bụ azụ na 1800 dị ka ekweghị na Chineke wee na ụgha na Kraịst kweere ma ọ bụ na kweere na ụwa bụ ewepụghị. Ị eleghị anya, nụrụ ụgha na Christian Middle Ages chọọchị kwere na a ewepụghị ụwa na ndị nchụàjà dọrọ aka ná ntị Christopher Columbus njem gburugburu ụwa n'ihi na ha bụ ndị egwu adapụsị si ewepụghị ihu nke ụwa. Ma nke a bụ ụgha na a na-akpọ a factoid . Nke ahụ bụ ụgha nwere ibu eziokwu ma ka dị nnọọ a ụgha.
Na dobe ụgha na ndụ gị, ọ nwere ike na-emegharị gị Christian okwukwe ị na-amalite inwe obi abụọ Jesus na ike-emecha-ahapụ ya. Ya mere nke a dị nnọọ ize ndụ. E ọ bụla villoläras mgbaru ọsọ ndị na ị ga-mgbagwoju anya, na-amalite na obi abụọ nke mere na ị na-ahapụ okwukwe nke Jizọs mere na ị ga-azọpụta.
Kwusara Ozi Ọma a gburugburu ụwa
Na ukwọrọikọ oro ke emepechabeghị ẹkenịmde megidere ihe ọtụtụ kwenyere na ọ bụghị Latin ma dị n'asụsụ ógbè. Ndien ke ukwọrọikọ oro-emeso na-e kere eke atụmatụ, gụnyere nke Ụwa * Tụkwasị na udi.
The Norwegian Konungaspegeln si 1200s bụ a grassroots n'akwụkwọ kwuru ụwa udi ma agụmakwụkwọ na-akọwa onye na-agụ na ọ ga-iche na nke ụwa dị ka ihe udara nghọta kpam kpam. Ọ bụrụ na ị ahụ n'ihi na ìhè gburugburu apụl, dị ka kọwara ehihie na abalị, na onodu ubochi iche n'etiti Nordic mba na mba gburugburu ụwa.
Petrus de Dacia, na-ezo dị ka Sweden akpa odee, bụ Dominican mọnk si Gotland. N'ihe odide ya na ndị ụwa obi ụtọ udi doro anya.
Dome ma ọ dịghị eluigwe na ala
Plat kwere ekwe na-ekwu na ụwa bụ a ewepụghị gburugburu diski na a diski bụ a dome. Na nke a dome, anyanwụ bụ kpakpando na ọnwa mmasị ma nke a bụ belata Chineke. Chineke site n'okwukwe a ekeghị eluigwe na ala, ma o kere a ala na a dome na ụfọdụ kpakpando, anyanwụ na ọnwa na. E nwere ihe dị na mbara igwe.
Gịnị a obere Chineke, m na-ekweghị. Ha belata Chineke. M kwere na a nnukwu ike Chineke onye kere eluigwe na ala nile.
Nke a bụ otu n'ime ndị mere m malitere zọpụta mgbe mbụ m nụrụ banyere ịhụnanya Chineke. Echere m na ọ bụrụ na Chineke dị, ọ ga-kere ihe niile a na nnukwu. N'ihi ya eluigwe na ala nke ụwa na ihe niile. Na ihe niile a Chineke ukwu hụrụ m n'anya.
Iji kwere na Chineke kere a ewepụghị diski na a dome nke kpakpando na ọnwa na anyanwụ na-mmasị bụ n'ezie belata anyị ukwu di Chineke. My Chineke dị ike ma dị nnọọ ukwuu nke na o kere eluigwe na ala nile na ụwa na Okwu ya!
Hibru 13: 3rd "Site n'okwukwe, anyị na-aghọta na eluigwe na ụwa na e kere site n'okwu Chineke , nke mere na ọ bụ anya na-mere nke ihe anyị nwere ike ịhụ."
Ewepụghị Earth-akwado echiche agọnahụ eluigwe na ala dị adị. Ma, ebe ọ bụ doro anya na eluigwe na ala na e kere site n'okwu Chineke. Eluigwe na ala dị na-enweghị mgbagha na - na Bible na-ekwu, otú a.
Site n'okwukwe anyị na-aghọta
Ọ bụrụ na gị ugbu a na-esiri ike ịghọta na Chineke kere dum eluigwe, ị kwesịrị ị na-eme ihe anyị na-agụ na amaokwu:
Hibru 13: 3rd " Site n'okwukwe, anyị na-aghọta na eluigwe na ala na e kere site n'okwu Chineke ..."
Anyị ga kwere ! Na site na okwukwe ịghọta anyị na eluigwe na ala na e kere site n'okwu Chineke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta: okwukwe! Site n'okwukwe, ị ghọtara. Ma i nwere ike na-aghọtaghị na mbụ okwukwe. Okwukwe ga-enwe mgbe nile ndị nke mbụ. The nghọta na-abịa mgbe. Site n'okwukwe ị ga-aghọta.
O juru m anya
Ọ bụ na 2017 na m chọpụtara na m na anya na e nwere ndị kweere na ụwa bụ ewepụghị. E nwere ndị na-abụghị Ndị Kraịst bụ ndị kwere na ya, na m n'ihu na anya, e nwere ndị Kraịst bụ ndị kwere na!
Ha na-ekwu na ọ bụ a conspiratorial ugha nke si anyị ọchịchị na ụwa ga-abụ gburugburu. Ha na-eleghara eziokwu ahụ bụ na ihe nile ugboro na ndị mmadụ kweere na ụwa gburugburu. Ọbụna Bible na-ekwu na a gburugburu ụwa.
The ewepụghị ụwa bụ gburugburu
Ndi ị maara na Bible kere akụkọ na Jenesis na-akọwa a gburugburu ụwa? Ọ bụrụ na anyị na-agụ Bible bokstsavligt anyị na-ahụ na ọ na-akọwa a gburugburu ụwa, a gburugburu anyanwụ, a gburugburu ọnwa na kpakpando gburugburu.
E nwere ndị na akpakanam mgbe m isiokwu banyere ize ndụ ewepụghị ụwa ozizi na e nwere ndị kweere na a ewepụghị ụwa na-mgba ya. Ha na-achọpụta na ọ dị iche. Tupu m wee gafee nke a, adịghị m eche ndị ahụ dị nnọọ ọtụtụ ndị chere na ụwa bụ ewepụghị.
A Christian enyi chere na ọ bụ ihe ijuanya, mgbe ọ na-agụ banyere nke a na m blog site, ma mgbe ahụ, ọ chọpụtara na ya na abụọ iberibe kwenyesiri ike na ụwa dị larịị.
A ogologo oge gara aga, m hụrụ usoro ihe omume telivishọn na nkịtị Swedish TV na bụ banyere ihe American otu kwuru na Earth bụ platt.De bụ nwee obi ike na anyị na e ghọgburu na na ọ bụ akụkọ ihe mere eme kasị ukwuu ụgha na izu ọjọọ na ụwa ga-abụ gburugburu. Ọ na-ike na-arụ ụka na ha n'ihi na ha na e na-arụ ụka maka esemokwu na Earth bụ ewepụghị. Ndị gị na e nwere foto nke mere ha dị nnọọ à ya anya, sị: "Ha bụ foto jumped!"
Ezighị na Bible ederede
Ee e nwere ọbụna ndị Kraịst bụ ndị kwenyesiri ike na ụwa dị larịị. Ma mgbe ha na-ezo aka Bible. E nwere ndị ọzọ ewepụghị ụwa kwere ekwe bụ ndị na-azọrọ na okpukpe ndị ọzọ ka Islam na New Age na kwenyere a ewepụghị ụwa. O yiri ka a ewepụghị ụwa kwere ekwe ekumeniker mgbe ahụ, ha nwere ike ikwere ihe a ewepụghị Earth.
Ma, n'ihi na Christian ka Bible na pụtara na ụwa dị larịị ọ ga-ịgwagbu Bible ederede ukwu na-apụnara ya nke onodu. Iji na-agụ Bible dị ka ọ bụ n'ezie, ị na-ahụ n'ụzọ doro anya na Bible na-akụzi na ụwa bụ gburugburu!
N'eziokwu ị na-adịghị ọbụna mkpa sayensị aka gosi na ụwa gburugburu. Ị na mkpa na-agụ Bible site na afọ a na-ezi, na ọ bụ eziokwu ugbu a.
Ka anyị lee ihe Bible kwuru banyere ihe e kere eke. Chineke kere ụwa ná mmalite. O mere nke a, n'ụbọchị mbụ. Mgbe ụbọchị anọ gafere, Chineke kere anyanwụ ọnwa na kpakpando. Ọ bụ oké ọkụ. The Bible na-ekwu na anyanwụ bụ ibu karịa ọnwa. Ha abụghị ndị dị ka nnukwu.
The ewepụghị ụwa kwere ekwe na-ekwu na anyanwụ na ọnwa na-hà na-enwe otu anya si Earth. Nke a bụ adịghị agbanwe agbanwe na Bible. The Bible na-ekwu na ọnwa na-ntakịrị karịa anyanwụ. Ya mere, ha na-ahaghị nhata.
Ndị na-ekwu na anyanwụ na ọnwa na-hà okwu megide okwu Chineke. O si otú na-enye Bible na sayensị nri, nakwa site n'ụzọ, mgbe m na-eche banyere ya, ị dị nnọọ nwere anya elu na mbara igwe na-ahụ na ha bụ ndị dị iche iche nha na ndị a dị n'eluigwe dị iche iche.
Ndị a ndị ozizi ụgha na-ekwu na anyanwụ na ọnwa na-otu ihe ahụ. Ha bụ otu ụdị nke ìhè. Ọ bụ naanị na ọnwa ìhè na-enwu a nta na-adịghị ike. Ha pụtara na-ekwu na ọnwa na a na-ere Orb ke otu ụzọ dị ka anyanwụ. Ee n'ezie a na-ere bọl. Ha na-ekwu na e nwere a Chakwasa ihie bọlbụ ìhè n'elu uwa, na mgbe ha na-ekwu na anyanwụ bụ ụdị nke ìhè na-enwu na Earth.
Anyị na-ele anya ruo mgbe anyanwụ na anyị hụrụ na e nwere a na-ere bọl. Ọ bụrụ na ọnwa nke ga-abụ a ọkụ Orb, olee otú otu picture nke ọnwa na ya craters-abụ otu afọ mgbe afọ? Gịnị mere adịghị agbanwe agbanwe na-amị n'ọnwa odida obodo nke ọnwa mejupụtara a ọkụ inferno? Ndị a pụtara na ọ bụ ụgha na ọnwa na-egosipụta anyanwụ na ụzarị n'ebe Earth.
Iji nweta echiche a nwere scramble okwu nke Bible, na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha na-eme mgbe ha na-agbalị ịmanye nke a echiche site n'ikwu na Chineke kere abụọ ọkụ hà. Na ndị ọzọ okwu, ọnwa ìhè na-ahụ dị ka anyanwụ, ma iji mee ka ọnụ a ị ga-ịgwagbu na ghọtahie okwu Chineke maara.
Mgbe Chineke na-ekwu banyere ọkụ na-adịghị ahụ pụtara otu ihe ahụ bụ otu ụdị nke ìhè. Ọ na-ekwu na anyanwụ bụ elu na ọnwa na-nta na Akwụkwọ Nsọ ederede. N'ihi ya, ọ bụ abụọ dị iche iche iche iche nke ìhè.
Ọzọkwa, Bible abụghị a na nkà mmụta sayensị n'iwu. The Bible e dere n'ihi na ị na-eche echiche ma na-achọta ụzọ nzọpụta site na Jizọs Kraịst, Ọkpara nke Chineke. Ọ bụ ya mere Bible na akwụkwọ e. Ọ na-adịghị dere inye a na nkà mmụta sayensị n'iwu. Ma akara na sayensị. The abụọ nwere ike ikwu okwu ọ bụla ọzọ.
Anyanwụ ga-achị ụbọchị na ọnwa ga-achị n'abalị. Ọbụna ebe ị pụrụ ịhụ na ụwa dị gburugburu. Ma ọ bụghị ya ga-ehihie na abalị. Ọ bụrụ na anyị na-agụ Bible dị ka ọ bụ mgbe ọ dịghị mgbe na-akawanye ọ bụla na-akpa ọchị azụmahịa. Ma mgbe anyị na-amalite na-etinye uche na ụmụ mmadụ echiche mgbe ahụ, ọ ga-crazy, na anyị nwere ike inwe na-ezighị ezi ọ bụla. Ọ pụrụ iduga heresy bula, nke anyị hụrụ ọtụtụ ihe atụ.
Ewepụghị Earth nchiyo na-eduga ná ndị ọzọ ozizi nduhie. Ha kweere na ndị Juu na-akpata ihe ọjọọ niile n'ụwa. M bịara ewepụghị ụwa kwere ekwe na-ekweghị na the Holocaust, ndị Juu mgbukpọ n'oge Agha Ụwa nke Abụọ, mgbe nde ndị Juu isii e gburu nanị n'ihi na ha bụ ndị Juu.
Kama, ha kwere na nke a bụ ụgha kere ndị Juu ka ha na si otú mmetụta ọmịiko nke mere na ha nwere ike ịlaghachi n'ala ha nke Israel. Ọbụna ọ bụ ya mere na ha na-ekweghị na ọ bụ Chineke na-akpata Land of Israel.
Ha ekweghị na Chineke nyere ndị Juu nke Israel na 1948. Kama, ha kweere na ọ bụ ekwensu. Ị na-achọpụta na-eme ewepụghị ụwa kweere pụrụ iduga? - Ọbụna ihe ụgha na aghụghọ!
Earth, anyanwụ, ọnwa, kpakpando
Ugbu a ka na-aga azụ ihe Okwu Chineke kwuru. Ndị kweere na a ewepụghị ụwa pụtara na ụwa bụ a ewepụghị gburugburu disk na bụ ala. Ha na-ekwu na anyanwụ bụ a ewepụghị gburugburu disk na ọnwa dị ka nke ọma. Ma nke a abụghị nnọọ mfe ịchọpụta. Ọ bụ naanị na-achọ elu na mbara igwe anyanwụ na ọnwa na ị ga-ahụ na ha bụ gburugburu bọọlụ.
Ugbu a, kpachara anya mgbe ị na-ahụ anyanwụ. Ọ pụrụ ịdị ize ndụ anya na anyanwụ. I nwere ike kpuo ìsì. Ya mere, mkpa ka i nwere oké nchebe maka gị anya mgbe ị na-ahụ anyanwụ.
Ka anyanwụ na ọnwa bụ gburugburu, mgbe ahụ, ọ bụ n'ezie nakwa ụwa gburugburu. Chineke ò adị otú ambivalent na ọ na-emepụta dị iche iche? N'ezie ọ bụghị! The Earth na anyanwụ na ọnwa na-kere gburugburu. Chineke adịghị eje ije n'ebe ihe o kere eke edumbet. Ọ na-eji otu ụkpụrụ a mgbe o kere ụwa, anyanwụ na ọnwa na kpakpando.
Anyị ga-aga megide Chineke si dị nke e kere eke iji mee ka ọnụ a ewepụghị ụwa. Anyị ga-mere-aga megide okwu nke Chineke, ihe e dere banyere akụkọ na akụkọ nke e kere eke.
The anyanwụ na ọnwa ga-mete ugboro, ma ndị a ugboro naanị ike jide ma ọ bụrụ na ụwa gburugburu. Ma ọ bụghị ya, ọ bụghị ọgụgụ oge na-arụ ọrụ. Ụbọchị na ọnwa na a pughi igu ma ọ bụrụ na ụwa gburugburu.
Ọzọ, ị na-ahụ ugbu a na nke a kere eke nke na Bible na-akọwa a gburugburu ụwa. E nwere ndị ọzọ na ebe na Bible banyere a gburugburu ụwa ma ọbụna ebe a na Bible mbụ agụba kọwara a gburugburu gburugburu ụwa na ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na-akọwa a gburugburu ụwa dị ka ọ na-kọwara a gburugburu ọnwa, na kọwakwara gburugburu kpakpando. Na-ezo!
Ọnwa na-akpali mara na ọnwa na-bụghị mgbe niile gburugburu? Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe dị nnọọ a mpekere onwa. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị a obere mpekere onwa, na mgbe ụfọdụ na-apụghị ịhụ na ọnwa na niile dị iche iche ugboro. Nke a bụ n'ihi na Earth shades Ọnwa okirikiri. Ọ gaghị ekwe omume iji nweta ndị dị otú ahụ a onyinyo ma ọ bụrụ na ụwa a na gburugburu.
Ịkpọlite ​​a ewepụghị n'ala mgbe ahụ ị ga-aga megide gị n'uche. Ị ga-aga megide ihe anya gị na-ahụ ma-agọnahụ eziokwu. Ikwere na eziokwu na-ekwere ihe ị na-ahụ, n'ihi na ị ga-abụ na ihe ọjọọ.
Anyị nwere ugbu a na-ele anya na ihe e kere eke nke Bible na kwubiri na Chineke kere a gburugburu ụwa, a gburugburu anyanwụ, a gburugburu ọnwa na kpakpando gburugburu. Chineke na-ekwu a gburugburu ụwa na ndị ọzọ na ebe na-na Bible.
The mmiri n'elu mbara ahu
Tupu anyị kwụsị isiokwu a, m ga-ekwu banyere otu ihe dị mkpa ewepụghị ụwa na-akwado echiche ugbo isi. Ha na-ekwu na na ewepụghị n'ala, ọ bụ a dome. The dome bụ elu-igwe, ha na-ekwu, na n'elu dome e nwere ọtụtụ mmiri.
Nke a nwere ike ụda otú crazy ọ bụla oge ma nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike n'eziokwu ahụ na Akwụkwọ Nsọ na ya. Ọ na-e dere na Chineke kere a mbara n'etiti mmiri, na iche na mmiri n'elu uko na mmiri n'okpuru uko. Ebe a na-ewepụghị ụwa kwere okwu. Na ha na-eche na ha na-na na hụrụ a n'ezie ezi okwu. Na ọ bụ ike ịgbagha ọ bụrụ na ị nwere ogbenye ihe ọmụma nke Okwu Chineke na Bible. Ọ bụ n'ezie na Bible ederede na e nwere mmiri n'elu mbara ahu.
Ma anyị maara taa na ọ dịghị mmiri n'ebe ahụ. Mgbe ha gara ọnwa site 1969 ruo 1972 n'ihi ya, anyị na-gwara ihe ọ bụla banyere na ha gara site a oké osimiri nke mmiri n'elu mbara ahu. Ihe kpatara nke N'ezie bụ na ọ dịghị mmiri n'ebe ahụ. The Bible na-akọwa na a nnọọ mfe n'ụzọ otú ihe n'ezie. Ya mere, anyị kwesịrị ịdị na-agụ Bible. Mgbe ahụ, anyị ga-esi na azịza.
Mgbe Chineke kere ụwa ka ọ bụ n'ezie mmiri gburugburu mbara igwe. Ihe ọzọ anyị na-apụghị ịghọta Bible ederede. Ọ bụ otú ahụ, ma n'ihi na anyị maara na mmiri bụ n'ebe taa, ihe ga-mere ndị emiela. Mgbe nke a mere, na mmiri a mgbe mmiri okụrede? Olee otú nke ahụ si eme? The Bible kemgbe a mma nzaghachi.
Noa na Iju Mmiri
People biri na mmehie, na ụwa jupụtara n'ime ihe ike na ajọ omume. Mgbe Chineke kpebiri ime ihe niile ndụ na Earth site Nrịrọ ya na mmiri. Ma Chineke abụghị a bloodthirsty Chineke bụ onye chọrọ ka ọnwụ mberede. Ọ dịghị, ọ bụ Chineke nke ịhụnanya, bụ onye chọrọ iji napụta na nzọpụta. Ya mere, ọ chọrọ ịzọpụta Noa na ezinụlọ ya.
Nke a ga-eme site, o wuru ụgbọ, a ibu ụgbọ mmiri. Ha ga-eme ka abụọ ụzọ abụọ ọ bụla anụ nke uwa, ya mere a ga-azoputa. Noa wuru ụgbọ, na iju mmiri ahụ bịara. All ndụ na-adịghị na ụgbọ ahụ, ma mmadụ ma anụmanụ, mmiri riri, gburu na n'iyi mgbe iju mmiri ahụ bịara.
Mgbe iju mmiri ahụ bịara, nke a mere nnọọ ngwa ngwa. Ngwa ngwa jupụtara ụwa site na mmiri. Earth bụ a mmiri planet. Olee otú ụwa ga-jupụta site mmiri? Olee otú ọ mere na otú o si na-aga ngwa ngwa?
The Bible na-ekwu na Chineke meghere window nile nke eluigwe na nke miri emi na isi mmalite. Mgbe ahụ, e nwere mmiri karịa eluigwe n'elu mbara ahu. Ọ bụ mmiri ka anyị na-ekwu banyere. Chineke meghere eluigwe windo otú ahụ ka mmiri nwere ike gush ala n'ụwa. Ọ tara nnukwu ego n'akpa nanị eluigwe ọdọ. Ọ tara nnukwu ego n'akpa eluigwe mmiri tankị. The miri nke di n'elu elu-igwe na jupụtara ụwa na mmiri na mmiri site na miri na isi mmalite. Ọ bụ ya mere na anyị anaghị ahụ ihe ọ bụla mmiri taa n'elu mbara ahu.
The Bible mgbe niile nwere azịza nye. The Bible na-enye gị a mma okwukwe. Ị na-agụ ya mgbe ahụ ị ga-abụ na ihe ọjọọ.
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 08:19